Ny hoavin'ny rongony ara-dalàna sy ny olana atrehin'izany
Provided by: https://2fast4buds.com/
Tamin'ny taona 2020, hitan'i Gallup fa ny 68% an'ny Amerikanina manaparitaka firaketana dia manohana ny fanomezana ara-dalàna ny marijuana - fiakarana mahatalanjona avy amin'ny 12% fotsiny tamin'ny 1969 raha nanomboka nametraka ny fanontaniana ity masoivohom-pifidianana ity.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, firenena roa - Kanada sy Uruguay - ary koa fanjakana 17 any Etazonia no nanome lalana ara-dalàna ny fampiasan'ny olon-dehibe an'io fanafody io. Mbola firenena sy fanjakana ary faritany maro kokoa aza no namorona ny rafitra ara-dalàna amin'ny fampiasana fanafody. Raha vao lohahevitra fady dia efa ela ny marijuana no niditra an-tsakany sy andavany.
Mahery vaika koa ny mpanohitra. Tsy tian'ny mpanohitra ny fampahafantarana an-tsitrapo amin'ny fiaraha-monina misy zava-dratsy hafa, fa tsy toy ny paraky sy alikaola. Ny tsy tsapan'izy ireo dia tsy ilaina ny fampidirana: ny fampiasana rongony marobe dia efa ampahany amin'ny fiainana maoderina ary mety hijanona amin'izany.
Manaiky izany, mora kokoa ny mihevitra ny fanarahan-dalàna marijuana ho toy ny rafitra manaparitaka fahavoazana kendrena hifehy izay efa eo. Io koa dia ahafahan'ny iray mamotopototra tsy misy dikany ireo torolàlana izay alehan'ny 'cannabusiness' ara-dalàna sy ireo fanamby mety hatrehin'izy ireo.
Fambolena, fizarana ary fivarotana
Raha ny fanadihadiana an-tsena navoakan'i Data momba ny sisintany vaovao, ny haben'ny tsenan'ny marijuana any Etazonia dia 77.6 miliara dolara tamin'ny taona 2019, ary 13.6 miliara dolara monja amin'io fangatahana io no tratry ny indostrian'ny lalàna. Na izany aza, izany dia namorona asa 340,000 miaraka amin'ny karama 12.4 miliara dolara.
Ny tatitra iray ihany dia nanombatombana fa, raha ara-dalàna ny fitrandrahana rongony dia hiteraka asa 1.63 tapitrisa izany, hahazo 59.5 miliara dolara amin'ny karama amin'ny 2025.
Ny ankamaroan'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny rongony dia mandray anjara mivantana amin'ny famokarana ny akora, ary koa ny fizarana sy ny fivarotana amin'ny mpampiasa farany. Ireo sehatra ireo dia toa manjaka ihany koa amin'ny ho avy. Na izany aza, ny fambolena rongony dia mety hiharan'ny fiovana goavana rehefa mandroso ny ara-dalàna.
Na dia mandraka ankehitriny aza, marobe marobe any Etazonia no ambolena eo ambanin'ny jiro artifisialy any amin'ny trano fanatobiana entana sy fotodrafitrasa hafa. Ny lafiny iray dia noho ny lalàna mifehy ny fitakiana ny tokony hanafenana ireo zavamaniry tsy ho hitan'ny besinimaro ary hambolena amin'ny toerana azo antoka. Na izany aza, rehefa mandroso ny fanarahana ny ara-dalàna sy ny fanilikilihana manodidina ny akora, ny zavatra lojika tokony hatao dia ny fitsaboana ny rongony toy ny voly fambolena hafa ary mamboly azy eny ivelany sy mampiasa ny hazavan'ny masoandro voajanahary.
Ankoatr'ireo zavatra hafa, tsy isalasalana fa hampihena ny vidiny io.
Fizarana manerantany momba ny asa
Na dia ara-dalàna any Etazonia fotsiny aza ny marijuana ary mijanona ho zava-mahadomelina voaomana eran'izao tontolo izao, dia afaka manantena ny hamoizan-danja ny famokarana ao an-toerana ary ny fotodrafitrasa mitombo dia hiroborobo any amin'ny fanjakana izay misy toe-javatra voajanahary mety ho an'ity mpamboly ity.
Amin'ny alàlan'ny fanarahan-dalàna eran'izao tontolo izao, ny firenena sasany — angamba ireo izay karazan-javamaniry voajanaharin'ny zavamaniry - dia ho tonga mpamatsy raha ny hafa kosa hivadika ho mpanjifa.
Fampihenana ny fahavoazana eo amin'ny tontolo iainana
Ankoatry ny vidin'ny famokarana, ny adihevitra iray hafa momba ny fitomboan'ny rongony voajanahary dia ny fiatraikany ratsy amin'ny fambolena anaty trano amin'ny tontolo iainana. Izany dia mitaky ny filàny be amin'ny rano, ary koa ny resaka fandotoana ny loharanon'ny rano amin'ny fako, zezika ary pestiside. Fa mbola zava-dehibe kokoa aza ny olan'ny fanjifana herinaratra satria tombanana ho 1% amin'ny herinaratra rehetra vokarina any Etazonia no lanin'ny fambolena rongony, tsy ara-dalàna na ara-dalàna.
Sehatra hafa mety hahazo tombony amin'ny fanamafisana ara-dalàna ny Marijuana
Raha ny zava-nitranga, ny famokarana / fizarana rongony - raha ara-toekarena - dia ivon-toerana manodidina azy izay maniry sehatra maro hafa. Na dia ny toa fihomehezana toa ny fambolena an-trano aza dia toeram-piterahana manankarena ho an'ny orinasa lehibe maro, toy izany FastBuds ary mpamokatra masomboly maro hafa, mpanamboatra zezika sy fitaovana mitombo.
Ny fanjakana ara-dalàna any Amerika, ohatra, i Colorado, dia nahita fisondrotana amin'ny fizahan-tany rehefa mirohondrohona ny olona hanandrana ny ahidratsy ara-dalàna na fotsiny satria manome azy ireo fotoana hankafizana hetsika hafa, toy ny fahitana maso na fanaovana ski, nefa tsy milavo lefona amin'ny toerana tiany indrindra. vice mandritra ny fialan-tsasatra. Na izany aza, rehefa tonga ara-dalàna amin'ny faritany rehetra ny lalàna, dia mety hihena izany vokatra mahasoa izany.
Notanisainay ireo asa marobe ateraky ny indostria. Ny sasany amin'ireny dia mitaky fahaizana sy fahaizana izay azo atao raha tsy amin'ny fanabeazana ofisialy. Na dia androany aza dia misy ny oniversite mampiofana ny mpianatra hanao asa rongony mahay.
Ary, mazava ho azy, ny sehatry ny haitao no iray izay nahita fanombohana maherin'ny arivo nipoitra izay manome ny filan'ny indostrian'ny rongony. Anisan'ireny i Leafly, Eaze, MassRoots, ary tranokala sy rindrambaiko ary mpamorona rindrambaiko mitovy amin'ny mpampiasa, mpamandrika na mpitsidika an-tapitrisany.
Farany nefa tsy azo odiantsy farany, ny fanaovan-dalàna ny rongony dia azo antoka fa hampihena ny fifehezana ny hemp, ny 'zanak'olo-mpiray tam-po aminy'. Izy io dia afaka mamorona fanentanana tena ilaina ho an'ny indostria izay ny vokatra azo ampiasaina amin'ny fanamboarana, ny famokarana fiara, ny famokarana solika, tsy lazaina intsony ny indostrian'ny lamba mahazatra. Raha ny marina, ny hemp dia fitaovana marobe izay mety manana rindranasa an'arivony maro.
Tags:vaovao momba ny fanarahan-dalàna rongony, ho avy ny rongony, Paositra Sponsored